Ogaden News Agency (ONA) – War-baahinta Norway oo Wareysatay madax-katirsan maamulka Jaaliyada S. Ogadeenya ee dal Norway
War-baahinta Norway oo Wareysatay madax-katirsan maamulka Jaaliyada S. Ogadeenya ee dal Norway
Posted by wariye5	/ June 2, 2011
Oslo- Televisionka iyo Radio-ga dalka Norway, ee marka magacooda la soo gaabiyo loogu yeedho NRK-P2, ayaa wareysi dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaya la yeeshay xubin sare oo katirsan maamulka Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya ee dalka Norway, Engineer Ahmed Iman.
Engineer Ahmed Imaan, ayaa waxa kamid ahaa wareysigii lala yeeshay safarkii madaxda sare ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadeenya (ONLF), ku yimadeen caasimadda Norway ee Oslo, dhamaadkii asbuucii tagay iyo madaxdii ay la kulmeen. Madaxda Jabhadda ONLF, ayaa kulamo kala duwan la yeeshay intay safarka ku joogeen caasimadda Oslo, mas’uuliyiin sar-sare oo ka tirsan dawladda Norway, iyagoo kulamo kala duwan u qabtay bulsho-weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway.
Engineerka ayaa soo dhaweeyey cadaadiska wasaaradda arimaha dibadda ee Norway, ku saartay nidaamka Males Zenawi, sidii uu u joojin lahaa xasuuqa askartiisu ka geysanayaan dhulka Ogadeenya, ee ku hoos jira gumeysiga Ethiopia, wuxuu sidoo kale, shaaca ka qaaday dadaalada kala duwan ee maamulka Jaaliyaddu ku talaabsatay mudooyinka dambe.
Wareysiga lala yeeshay mas’uulka Jaaliyadda ayaa yimid maalin kadib markii booqasho hawleed ku yimadeen wadanka Norway, gudoomiye ku-xigeenka ururka ONLF, Mudane Mohamed Ismaciil iyo Hogaanka Arrimaha Abaabulka Bulshada ee ururka ONLF, Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane, oo shirar u qabtay bulsho-weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada Oslo iyo nawaaxigeeda.
Waxaa xusid mudan dadaalada aan kala go’a lahayn ee Jaaliyadda Ogadeenya, kawado dalka Norway ee ku saabsan dar-dar gelinta qadiyadda Ogadeenya, tayeynta iyo sare u qaadida wax-qabadka Jaaliyadda iyo horumarinta bulshada ay matalaan.
guulaysta jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee Norwey,